Ngaba kufanelekile ukuba wakhe okanye uthenge iqonga lakho elilandelayo lokuthengisa? | Martech Zone
Lwesine, Okthobha 16, 2014 Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 Douglas Karr
Kutshanje, ndibhale inqaku ndicebisa iinkampani ukungabambi ividiyo yabo. Kwakukho ukubuyela umva kuyo ukusuka kwezinye iiteki ezazikuqonda ukungena nokuphuma kokubamba ividiyo. Babenamanqaku amahle, kodwa ividiyo ifuna abaphulaphuli, kwaye uninzi lwamaqonga abanjelweyo abonelela kanye. Ke indibaniselwano yexabiso lomda wendlela, ubunzima bescreen, kunye nokunxibelelana, ukongeza kubukho babaphulaphuli yayizezona zizathu zam eziphambili.
Oko akuthethi ukuba andikholelwa ukuba iinkampani akufuneki zijonge ixesha elide ekwakheni isisombululo. Kwimeko yevidiyo, umzekelo, iinkampani ezininzi ezinkulu zidibanise iqhinga labo levidiyo kunye Ulawulo lwee-asethi zedijithali iinkqubo. Yenza ingqiqo!
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo xa amandla ekhompyuter ayebiza kakhulu, i-bandwidth yayixabisa kakhulu, kwaye kufuneka ukuba kwenziwe uphuhliso kwasekuqaleni, bekungayi kuba yinto encinci ukuzibulala kwinkampani ukuzama ukwakha isisombululo sayo sentengiso. Isoftware njengababoneleli beenkonzo ichithe iibhiliyoni kolu shishino ukuphuhlisa amaqonga anokusetyenziswa ngabaninzi kuthi-ke kutheni unokwenza olo tyalomali? Kwakungabikho kubuya kuyo kwaye unokuba nethamsanqa ukuba uyikhuphe emhlabeni.
Ukukhawuleza phambili namhlanje, nangona kunjalo, amandla ekhompyuter kunye ne-bandwidth zininzi. Kwaye uphuhliso akufuneki lwenziwe kwasekuqaleni. Kukho amaqonga ophuhliso olukhawulezayo anamandla, amaqonga wedatha amakhulu wedatha, kunye neenjini zokunika ingxelo ezenza ukuba imveliso ibe yexabiso eliphantsi kwaye ikhawuleze. Ungasathethi ke ngenani elikhulu lexabiso eliphantsi API (Inkqubo yohlelo lokusebenza) ababoneleli kwimarike. Umphuhlisi omnye unokwenza ucingo ngeqonga elinomsebenzi wolawulo olunkonkxiweyo kwaye uqhagamshele kwifayile ye API kwimizuzu nje embalwa.
Ngezi zizathu, siye saguqula imeko yethu kwiimeko ezininzi. Imizekelo embalwa endingathanda ukwabelana ngayo:
I-CircuPress -Ukuba bendipapasha iincwadana zam ukuya kumashumi amawaka ababhalisile, bendichitha imali eninzi kumboneleli we-imeyile kunokuba bendifumana ingeniso yentengiso yesiza. Ngenxa yoko, ndisebenze nomhlobo wam ukuphuhlisa iqonga lokuthengisa nge-imeyile elidityaniswe ngqo kwiWordPress. Kumadola ambalwa ngenyanga, ndithumela amakhulu amawaka e-imeyile. Ngenye imini siza kuyikhuphela wonke umntu!
UMgcini weDatha weSEO - Highbridge wayenompapashi omkhulu kakhulu owayenegama elingaphezulu kwesiqingatha sesigidi samagama aphambili ekufuneka elandelwe ngokwendawo, ngophawu, nangesihloko. Bonke ababoneleli phaya abaza kujongana nale nto babekwimigangatho emihlanu ephezulu yokufumana ilayisensi- kwaye akukho namnye kubo onokulawula umthamo wedatha abanayo. Kananjalo, banesakhiwo esikhethekileyo semodeli kunye nesimodeli seshishini esingahambelaniyo neqonga elisemathinini. Ke, ngexabiso lelayisensi kwenye isoftware, sikwazi ukuvelisa iqonga elikhethekileyo kwimodeli yeshishini labo. Lonke utyalomali abalwenzileyo ayilotyalo-mali kwilayisenisi abaya kuhamba kuyo-iyonyusa iqonga labo kwaye iyenza ukuba isebenze ngakumbi ngaphakathi. Bonga uhlalutyo oluxabisekileyo kunye nexesha lokulungisa ngokwakha iqonga labo.
Isosi seAgent -Uphuhlisiwe kule minyaka ilishumi idlulileyo ngumhlobo wam, uAdam, iqonga leSauce yeAgent yingqokelela epheleleyo yeemodyuli- kwiwebhu, ukuprinta, i-imeyile, iselfowuni, ukukhangela, ezentlalo, kunye nevidiyo. UAdam wayedla ngokusebenzisa iinkonzo ze-imeyile kwaye wayenobunzima ekusebenzeni ngokuxinana neenkqubo zabo, ngenxa yoko wazakhela eyakhe indawo! Ukwanika amandla eqongeni lakhe ngee-API ezininzi, ebonelela ngesisombululo esinexabiso eliphantsi esiya kuba ngamakhulu okanye amawaka eedola nakoluphi na olunye ushishino. Isosi seAgent ngoku sithumela izigidi zeemeyile kunye namashumi amawaka emiyalezo ebhaliweyo yeepeni kwidola. UAdam ukwazile ukudlulisela ngqo kulondolozo kubaxhasi bakhe.
Le yimizekelo nje embalwa apho, endaweni yokufumana ilayisensi yeqonga eliqhelekileyo elinomda ogqithisileyo, ezi zisombululo zakhiwa kwilifu, kwaye ngamanye amaxesha zisebenzisa ii-API ezomeleleyo. Unxibelelwano lomsebenzisi lwalulungiselelwe ngokukodwa isicelo kunye nomsebenzisi, kwaye iinkqubo zaphuhliswa ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi banokwenza yonke into ngaphandle kwethoni yexesha elichithwe kwimasaji yedatha okanye besebenza kwimicimbi yeqonga.
Sukuwujongela phantsi iinzame zokwakha
Kukho okwahlukileyo. Ngesizathu esithile, iinkampani ezininzi zikhetha ukuzakhela ezazo Inkqubo yoLawulo loLawulo kwaye kujika kube liphupha elibi. Kungenxa yokuba bajongela phantsi isixa somsebenzi osithathayo kunye nenani leempawu ezinazo ezo nkqubo ezenza ukuba indawo yokukhangela kunye neendaba zosasazo kube lula. Kuya kufuneka ulumke kakhulu kuvavanyo lweqonga onokuthi ungabi nawo amava. Umzekelo, xa besakha eyethu inkonzo ye-imeyile, besele siziingcali ekuhanjisweni kwe-imeyile kunye nasekuhanjisweni… ke sithathe zonke ezo zinto zongezelelekileyo ukuba sizithathele ingqalelo.
Oko kusebenza apho kulondolozwa khona iinkampani. Unokufuna ukujonga oku njengoko uhlalutya uhlahlo-lwabiwo mali. Ziphi iindleko zakho zokufumana ilayisensi ezinkulu? Ixabisa malini ukusebenza ngokuncipha kuloo maqonga? Luhlobo luni lokugcina iindleko kunye nokusebenza ngokufanelekileyo inkampani yakho enokuyiqonda ukuba iqonga lalakhelwe ukuhambelana neemfuno zakho endaweni yenxalenye yonke yentengiso? Ukuba uchithe iindleko zelayisensi kuphuhliso unyaka nonyaka, ungaba neqonga elingakanani ngokwesiko kwaye lingcono kunezisombululo zentengiso?
Eli lixesha lokuba uthathe isigqibo sokuba uza kuqhubeka uthenga isisombululo somnye umntu, okanye wakhe umsebenzi wobugcisa owaziyo ukuba unganyathela irhasi ngawo!
tags: isosi yearhenteApiyakha iqonga le-imeyileukwakha okanye ukuthengaYakha iqonga le seoiindleko zophuhlisoiindleko zobuniniIindleko zophuhlisoukudityaniswaIindleko zobunini